Farmaajo oo maanta khudbad ka hor-jeedinaya BF iyo R/W Rooble oo cod loo qaaday | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Farmaajo oo maanta khudbad ka hor-jeedinaya BF iyo R/W Rooble oo cod loo qaaday
Waxaa maanta lagu wadaa in xarunta shirarka baarlamaanka ee Villa Hargeysa ay kulan ku yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Kulanka maanta waxaa khudbad ka hor jeedinaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, sida lagu war-geliyey xildhibaanada.
Sidoo kale waxaa maanta la hor geynayaa golaha ra’iisul wasaaraha magacaaban ee dalka Maxamed Xuseen Rooble.
Ajendaha koowaad ee kulanka ayaa ah hadal jeedinta Madaxweynaha, waxaana la filayaa in xildhibaanada uu ka codsado inay codkooda kalsoonida siiyaan wasiirka koowaad ee xukuumadiisa, kaas oo uu dhawaan soo magacaabay.
Madaxwayne Farmaajo ayaa shalay madaxtooyada kulan wadajir ah kula qaatay guddoonka labada Aqal ee baarlamaanka federaalka, waxaana la sheegay inuu kala hadlay laba qodob oo kala ah, ansixinta heshiiskii doorasho ee uu la galay madaxda dowlad goboleedyada oo qodob ka mid ah uu dhigayey in baarlamaanka la hor geeyo iyo kalsooni siinta ra’iisul wasaaraha cusub ee uu dhawaan soo magacaabay.
Dhowrkii habeen ee lasoo dhaafay waxaa Muqdisho ka socday kulamo gaar-gaar ah oo lagu kasbanayey xildhibaanada, si codkooda kalsoonida ay u siiyaan ra’iisul wasaare Rooble.
Dhamaan madaxda dowlad goboleedyada ayaa weli ku sugan caasimadda Muqdisho, waxayna ka wadaan olole ay ku doonayaan in baarlamaanku meelmariyo heshiiskii iyaga iyo madaxweyne Farmaajo ay Khamiistii lasoo dhaafay ku gaareen Villa Somalia.
Sidoo kale ololahooda kama marna ka dalbashada xildhibaanada ee ansixinta ra’iisul wasaaraha cusub, si uu ula wareego hir-gelinta qodobada heshiiska looga gaaray hanaanka ay u dhaceyso doorashada Soomaaliya.
Maalmaha nasoo aadan ayaa lagu wadaa in baarlamaanka la hor-geeyo heshiiska laga gaaray arrimaha doorashooyinka, si ay u ansixiyaan, sida uu tilmaamayo qodobka 11-aad ee heshiiskaas.
Saacado un kadib markii la shaaciyey heshiiskaas 17-kii bishan ayuu madaxweyne Farmaajo magacaabay ra’iisul wasaare Rooble, hadii uu maanta kalsoonida baarlamaanka helana, shaqada ugu balaaran ee hor taalla waa hir-gelinta hanaanka doorasho ee lagu heshiiyey, taas oo la guda-gelayo 1-da bisha 11-aad ee November.
Farmaajo oo maanta khudbad ka hor-jeedinaya BF iyo R/W Rooble oo cod loo qaaday was last modified: September 23rd, 2020 by Admin